Kuhle kakhulu Ukusingathwa kweWebhu (2020) - Qhathanisa Ukusebenza Kokusetshenziswa Kwezimo Ehlukile
Fihla ama-IP wakho Vikela ikheli lakho le-IP kuma-scammers.
Ukuqhathaniswa kwe-Host HostQhathanisa kuze kube yizimboni zewebhu ze-3 ngesikhathi esisodwa.
Khetha Umsingathi OfaneleThola isincomo somsingathi ojwayelekile.
Ikhaya » Ukusingathwa Okuhamba Phambili kweWebhu ngo-2020 (Kususelwa Kwidatha Yangempela & Amacala Wokusebenzisa)
Ukusingathwa Okuhamba Phambili kweWebhu ngo-2020 (Kususelwa Kwidatha Yangempela & Amacala Wokusebenzisa)
Isihloko sikaJerry Low. .
Kubuyekezwe: Jul 23, 2020
Ngoba amawebhusayithi ahlukene anezidingo ezihlukile - Okuhle kakhulu kimi kungenzeka kungakulungeli. Ikhasi lesingeniso le-5 - abahlinzeki bewebhu abahamba phambili be-20 bangaba usizo kulabo abahlanganisa uhlu lwezitolo; abathengi abangathi sína abadinga ukuthenga i-web host ASAP bazodinga imininingwane eminingi.
Kusukela uhlu olude lwezibuyekezo zethu zokubamba, Ngikhethe izinkampani zokubamba iwebhu ezihamba phambili ze-10:
I-WP Web Host
Sizobabuyekeza ngamunye bese siqhathanisa ukusetshenziswa kwabo okuhlukile kuleli khasi.
Izinkampani ezi-10 Zokubamba Iwebhusayithi Kuhle kakhulu: I-Pros-vs-Cons & Verdict
Inkampani e-LA-based hosting esungulwe ku-2001. Futhi uphinde uphathe iHebhu Yokubamba IWebhu.
Qalisa: $ 4.99 / mo
ngoba: $ 12.99 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Isizinda samahhala, isitoreji esingenamkhawulo, ukusingathwa kwe-imeyli, isakhi se-Auto-SSL, isikhumbi se-drag-and-drop, isiqinisekiso sokubuyisela imali kwe-90 ngosuku.
24 × 7 ingxoxo bukhoma kanye nokwesekwa kwefoni.
Ukuhamba kwamakhasi mahhala kumakhasimende amasha.
50% isaphulelo (okukhethekile) uma uyala nge-link yethu yokukhangisa.
Ukuncintisana kwamanani okukhushulwa emva kwekota yokuqala.
Akukho ukusebenza okusheshayo kwe-akhawunti - ukuqinisekiswa kwefoni.
I-InMotion Hosting yasungulwa ngu-Sunil Saxena no-Todd Robinson ku-2001. Le nkampani manje iphethe amahhovisi amathathu eLos Angeles, CA, Virginia Beach, VA naseDenver CO, enezikhungo zedatha eLos Angeles, CA, nase-Ashburn, VA.
Abanabo futhi bephethe i-Web Hosting Hub futhi manje basebenzisa abasebenzi abangaphezulu kwe-300 enkampanini yabo.
I-InMotion Ukusingathwa kungumphathi we-web engingazifakazela mina uqobo - Iphrojekthi yami entsha I-hostScore isingathwe kwi-InMotion VPS futhi ngijabule kakhulu ngokusebenza kwayo.
I-InMotion Hosting isibe kulo mdlalo wokusingatha cishe iminyaka engama-20 - irekhodi labo lebhizinisi elide lokubonisa ukuthi bangabanikezeli abahle kakhulu ababamba iqhaza emakethe.
Izinto ezimbalwa ezenza i-InMotion Hosting ibonakale yizinsizakalo zabo ezizinzile (ezithola njalo> i-99.98% isikhathi sokuphumula) kanye nokusekelwa kwabo kwamakhasimende amahle kakhulu. Uma unezinkinga noma imibuzo, ukusekelwa kwamakhasimende abo kuhlale kushesha ukuphendula.
Inkampani inikezela ngezinhlelo ezintathu zokubamba ezabiwe ezinhle kakhulu kumawebhusayithi amancane kuya kwaphakathi; kanye ne-VPS nokusingathwa okuzinikele kumasayithi amakhulu.
Funda isibuyekezo sami esigcwele se-InMotion Hosting lapha
I-InMotion Lite (iqala ku- $ 2.49 / mo) ilungele ama-newbies, ama-blogger ngamanye kanye nama-freelancers abafuna isisombululo sokubamba esingabizi.
Nge-eCommerce namawebhusayithi anethrafikhi enkulu - sincoma i-VPS-1000HA-S ye-InMotion's (iqala ngo- $ 22.99 / mo).
Inkampani ye-Secaucus, NJ-based hosting, eyasungulwa nguMichael Lavrik noJohan Quaglieri ku-1999.
Ukubamba ngokuhlanganyela: $ 4 / mo
I-VPS ihlela: Qala ku-$ 6 / mo
Izinhlelo ezizinikezele: Qala ku-$ 70 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Isitoreji esingenamkhawulo, intengo yokungena ngemvume evinjiwe impilo, ukuxhaswa kwe-100 kwendlu ngaphakathi, izinhlelo ezihambelana ne-VPS zokusingatha.
Isiqinisekiso sokuthenga ngezindleko zokwabelana ngokuhlanganyela kanye ne-VPS.
Ukufuduka kwesayithi mahhala kubasebenzisi besikhathi sokuqala.
I-100% ukwesekwa kwamakhasimende asendlini.
I-virus eyakhiwe ngaphakathi nasekhaya isithwebuli se-malware.
Zama i-$ 0.01 ngenyanga yokuqala (ikhodi yekhuphoni: WHSRPENNY)
Indawo yeseva e-United States kuphela.
UMichael Lavrik noJohan Quaglieri basungula i-InterServer emuva ku-1999 ngesikhathi bebabili abafundi be-high school. Umbono wabo wenkampani kwakuwukuhlinzeka ngezinsizakalo zedatha ngamanani angabizi ngenkathi kugcinwa izinga lenkonzo nokusekelwa.
Umhlinzeki web hosting okwamanje unezikhungo ezimbili zedatha eziseSecaucus, NJ naseLos Angeles, CA; futhi inikeza izinsiza eziningi zokubamba ezifana nokubamba ngokuhlanganyela, ukubamba amafu, namaseva azinikezele, phakathi kwabanye.
Yize kungadingeki igama elijwayelekile embonini yokubamba, i-InterServer ikwazile ukubamba ukunaka kwethu uma sengazi inkampani kangcono.
Vele, akulimazi ukuthi bahlinzeka ngezinsizakalo zokubamba eziqinile ekuthengeni okukhulu kanye nokuguquguquka kokuthuthukisa uhlelo lwakho ku-VPS nokusingathwa okuzinikezele uma isayithi lakho liqala ukukhula.
Yini eyingqayizivele nge-InterServer isithembiso sabo sokuhlinzeka ngohlelo lokubamba okungabizi kumakhasimende alo. Uhlelo lwabo okwabiwe yilona kuphela kulolu hlu olunikezela ngentengo ekhiyiwe uma usubhalisile, okumanje kuma ngo- $ 4 / ngenyanga, KUPHELA, uma ubhalisela iminyaka emithathu.
Funda isibuyekezo sami esingajulile se-InterServer lapha
Ukusingathwa okwabiwe nge-Interserver kuhle kuma-blogger ngamanye namabhizinisi amancane. Kumabhizinisi amakhulu namawebhusayithi ane-traffic esindayo - amaseva awo we-VPS kanye ne-NJ-based collocation anikeza isisombululo esiguquguqukayo kakhulu.
Isekelwe ku-2004 yiqembu labangane beyunivesithi. Amahhovisi eBulgaria, e-Italy, eSpain, e-United Kingdom nase-United States.
Ukuqalisa: $ 6.99 / mo
I-GoGeek: $ 14.99 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Ukulondolozwa kwesikhashana kwe-CMS eyakhelwe ngaphakathi, ukusingathwa kwe-imeyili, i-HTTP / 2 Inikwe amandla, Masibethele i-Wildcard SSL.
Wakhelwe ngaphakathi Masibethele I-Standard & I-Wildcard ye-WildL.
Insiza yamakhasimende engxoxo ebukhomabona isifundo sami)
Ukukhetha izindawo ze-server ezindawenikazikazi ezintathu.
I-HTTP / 2, i-cacher eyakhelwe ngaphakathi, i-NGINX.
I-SiteGround yasungulwa ku-2004 yiqembu labangane beyunivesithi eSofia, eBulgaria. Namuhla, inkampani iholwa ngu-Tenko Nikolov, uReneta Tsankova, noNikolay Todorov.
Le nkampani isakhulile ukuqasha abantu abangaphezu kwe-400 namahhovisi aseBulgaria, e-Italy, eSpain, e-United Kingdom nase-United States. Okwamanje banezikhungo ezinkulu ze-6 ezise-United States, eNetherlands, e-United Kingdom naseSingapore.
Enye inkampani enamandla yokubamba iqhaza, i-SiteGround ingenye yezinkampani ezimbalwa ezizama ukuhlinzeka ngenkonzo yokwethenjelwa enokwethenjelwa ngezici ezintsha.
Esinye isici esinjalo yi-Super Cacher, okuyinto ithuluzi elenziwe ngaphakathi-caching elingenza amawebhusayithi alayishe ngokushesha. Esinye isici yikhono lokufaka Masibhale i-SSL ngokuchofoza okumbalwa, okwenza kube lula kakhulu kubasebenzisi ukuvikela iwebhusayithi yabo.
Ngenkathi intengo yazo yokuvuselela ingabhekwa njengemukelwa kancane, kufanelekile ngempela ngekhwalithi yokubamba oyitholayo. Ngicabanga ukuthi i-SiteGound ilungele abanikazi bebhizinisi kanye nama-blogger ochwepheshe abafuna isisombululo sokubamba esingenakukhathazeka.
Isibuyekezo se-Full SiteGround lapha
Ama-Newbies, ama-blogger ngamanye, amabhizinisi amancane kuya aphakathi, abasebenza ngokuzimela, izinhlangano ezingenzi inzuzo, abathuthukisi bewebhusayithi, abasebenzisi be-WordPress abasezingeni eliphezulu, i-eCommerce, isitolo se-inthanethi, kanye nezinkundla ezinkulu zewebhusayithi.
Indlunkulu e-Agoura Hills, eCalifornia; isungulwe ku-2006.
ngoba: $ 5.95 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Ukusingathwa okuluhlaza kwe-300% (okuphezulu kwemboni), ukukhetha kwezindawo ezine zeseva, izici zesivinini esihle, Masibethele i-Wildcard SSL.
Ukusebenza kweseva eqinile - kukalwe u-A kuzo zonke izivivinyo.
Ubungani bemvelo - Ukusingathwa okuluhlaza kwe-300% (okuphezulu kwemboni).
Uhlaka lwamaGenesisi wamahhala nezindikimba ze Studio Studio.
Ukufakwa okuzenzakalelayo kwe-SSL nokuvuselela.
Ukufuduka kwamasayithi wamahhala + umakhi wesiza osetshenziswa kalula.
Imali yokusetha ($ 15) ayibuyiselwa.
Ukwanda kwentengo ngesikhathi kuvuselelwa.
Isungulwe ku-2006 ngu-Trey Gardner, inkampani iye yazuza ekuhlangenwe nakho kwakhe okubanzi ezinkampanini eziningana ezinkulu zokubamba. Namuhla, u-Trey kanye neqembu lakhe elihlangene labaqeqeshiwe baye bakhela i-GreenGeeks ibe inkampani enempilo, ezinzile neyokuncintisana.
Izimpande zenkampani zihlala eNyakatho Melika futhi zikhonze amakhasimende we-35,000 ngezingosi ezingaphezu kwe-300,000. Njengenkampani eco-friendly, isizinikezele ekushiyeleni imithombo enamandla yamandla futhi isuse amandla asetshenzisiwe ngezikhathi ezintathu amandla asetshenziswayo.
I-GreekGeeks isikhwama esixubile samaqhinga kithi.
Ngakolunye uhlangothi, njengobuchwepheshe be-geek obesethemba ukuthi umhlaba (nokuphila kuwo) uzungeze isikhathi esiningi kakhulu, ngiyazisa ubuhlobo obuhle. Ngakolunye uhlangothi, ngihlala ngiyincwajana encane yecebo elilodwa-lihambisana-wonke amacebo.
Kubonakala sengathi kukhona ukulinganisela okungalingani lapha futhi ngiyaqiniseka ukuthi angibambe konke. Noma kunjalo, futhi ugcine engqondweni ukusebenza okuhle kakhulu kwejubane ama-GreenGeeks amaseva aboniswe ekuvivinyweni kwethu.
Ngezinga lomuntu siqu, nginomuzwa wokuthi lokhu kungumngane ozokwenza ngokumangalisayo nganoma yini evela ebhulojini yonke indlela ngisho nasebhizinisi elincane. Empeleni, ngicabanga ukuthi yindawo ekahle yokuqala isayithi labo, unikezwe izakhiwo, izindleko kanye nezinsiza ezikhona.
Funda kabanzi ekubuyekezweni kukaTimothyGeeks
Noma yibaphi abasebenzisi abafuna isixazululo sokubamba se-eco-friendly, ama-newbies, ama-blogger ngamanye, amabhizinisi amancane-aphakathi, abasebenzisi besabelomali, izinhlangano ezizimele, kanye nezinhlangano ezingenzi nzuzo.
I-2004 esungulwe, i-Hostinger yinkampani yokubamba isabelomali esebenza ezikhungweni eziningi zedatha emhlabeni jikelele.
Kwabelwana Ngabodwa: $ 0.99 / mo
Kwabiwe nge-Premium: $ 2.89 / mo
Ibhizinisi Labiwe: $ 3.99 / mo
Izici Key: Isizinda samahhala, umakhi wesayithi we-newbies-friendly, isizinda eshibhile se-.xyz, isabelo esabibiwe sokubamba okwabiwe.
I-Curl, Imisebenzi ye-Cron, i-MariaDB ne-InnoDB, Ukufinyelela kwe-SSH yezinhlelo zebhajethi.
Inkonzo yokufuduka kwesiza samahhala yamakhasimende amasha.
UZyro (umakhi wesiza osethuthukile) kufakwe kuzo zonke izinhlelo ezabiwe.
Ukukhetha izindawo ze-server ezindaweni ezingu-8.
Ukwesekwa okukodwa kokufaka okukodwa kokukodwa kohlelo olulodwa oluhlanganyelwe.
Okwamanje iholwa yi-CEO i-Arnas Stuopelis, i-Hostinger yaqala ukufakwa ku-2004 njengenkampani ye-"Hosting media" e-Kaunas, eLithuania. Eminyakeni embalwa kamuva, futhi baqalise i-000Webhost, amasevisi wamahhala we-web hosting ngaphandle kokukhangisa.
Naphezu kokuba inkampani yokusingatha ibhajethi, i-Hostinger inezikhungo zedatha ze-8 ezisendaweni yonke ne-Singapore ngokungezwa kwayo kwamuva. Zindawo zakwa-39 futhi zibhalisiwe ngokugcwele zobhalisi be-ICANN.
Kusukela kuqalwe, i-Hostinger isiye yaba yinkampani eyaziwayo yokubamba iqhaza enezigidigidi ze-29 abasebenzisi abanesilinganiso se-20,000 esisha yomsebenzisi nsuku zonke emhlabeni jikelele ku-2017.
Isihluthulelo sempumelelo yabo? Ukunikeza ithani lezici zokubamba nge-premium ngentengo ephansi ukuncintisana (enye eshibhile emakethe, bheka ithebula) kubasebenzisi bayo.
I-Hostinger ifanele isheke uma ufuna izici eziningi zokubamba ngangokunokwenzeka ngaphandle kokudinga ukushaya ibhajethi yakho.
Funda kabanzi ekubuyekezweni kwami ​​kwe-Hostinger okujulile
Ama-Newbies, ama-blogger ngamanye, amabhizinisi amancane kuya kwaphakathi, abasebenzisi besabelomali, abasebenza ngokuzimela, kanye nezinhlangano ezingenzi nzuzo.
I-6. Ukusingathwa kwe-A2
I-headquarters e-Ann Arbor, eMichigan; esungulwe ku-2001.
I-Turbo: $ 7.03 / mo
Izimpawu ezisemqoka: I-CMS eyakhelwe ngaphakathi, i-SSL yamahhala, noma nini nanoma yisiphi isiqinisekiso semali emuva.
Ilungiselelwe kahle ukusebenza kwe-server.
Isikhathi esithile sokuqinisekisa imali.
Ukukhetha izindawo ze-server ezindaweni ezine.
Uhlelo lweTurbo kuphela olweseka i-HTTP / 2.
Ukusekelwa kwengxoxo ebukhoma akuhlali kutholakala.
Vakashela ukusingathwa kwe-A2
Elandelwa yi-CEO uBryan Muthig, ukuHlaliswa kwe-A2 kwakhiwe emuva ku-2001 e-Ann Arbor, eMichigan futhi kwaziwa ngokuthi u-Iniquinet ngaleso sikhathi.
Kusukela ngaleso sikhathi, umhlinzeki we-web hosting we-Independently oguqule igama lakhe futhi wahambisa izinkulungwane zezingosi ezivelele nge-share, reseller, i-VPS, nezinhlelo ezizinikezele.
Ukusingathwa kwe-A2 bekuzungeze isikhathi eside, futhi bakwazile ukuhlala kule eside ngokugxila kulokho abakwenzayo kangcono: ukuba ngumsungathi wewebhu oshesha kakhulu.
Ngethuluzi lokulondoloza elenziwe ngaphakathi elibizwa ngokuthi i-A2 Ithuluzi elithuthukisiwe, amasayithi abanjwe ku-Hosting A2 alayisha ngokushesha kakhulu kunabathikazi abaningi bewebhu. Futhi, awunawo ulwazi lwezobuchwepheshe noma wenza noma yikuphi ukucushwa kokusingatha ukuze unike amandla. Ngezici nobuchwepheshe ezifana nesitoreji se-SSD, i-Railgun Optimizer, nesilondolozi esilungiselelwe ngaphambilini kumakhasimende ayo abamba ngokuhlanganyela, baqhubeka nokuphakamisa izinga lokuhlanganyela ngesivinini sokubamba.
Uma ijubane libalulekile kuwe, khona-ke ukusingathwa kwe-A2 kufanelekile ukuphuma.
Funda ukubuyekezwa okuphelele kwe-A2
Ama-Newbies, ama-blogger ngamanye, amabhizinisi amancane kuya kwaphakathi, abasebenzisi besabelomali, abasebenza ngokuzimela, izinhlangano ezingenzi inzuzo, abathuthukisi bewebhusayithi, abasebenzisi abasezingeni eliphakeme be-WordPress, i-eCommerce, isitolo se-inthanethi, nezinkundla ezinkulu zewebhusayithi.
I-7. Ukubamba kwe-TMD
Yasungulwa ku-2007, i-TMD Ukusingathwa ihlanganisa zonke izixazululo zokusingathwa kwebanga: Kwabiwe, Ukuthengiswa kabusha, I-VPS Cloud, i-WordPress Managed, futhi Kunikezelwa.
Uhlelo Lokuqala: $ 2.95 / mo
Uhlelo lwebhizinisi: $ 4.95 / mo
I-Enterprise Plan: $ 7.95 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Isizinda samahhala, isilungele i-Weebly, isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-60, i-NGINX, Masibethele i-WildCard SSL, ikhodi yesaphulelo ekhethekile "WHSR7".
Ukusebenza kweseva okuqinile.
Sula imihlahlandlela ekuvinjelweni kweseva.
Isiqinisekiso sembuyiselo yezinsuku ze-60
Isaphulelo esikhulu se-signups ezintsha
Insiza yamahhala yokufuduka kwesiza yabasebenzisi abasha.
Intengo evuselelekayo yokuvuselela.
Vakashela i-TMD Hosting
Ukusingathwa kwe-TMD sekuyiminyaka engaphezu kwe-10 futhi kubhekwe njengokukhetha okuthembekile kulabo abadinga umhlinzeki wokusingathwa kwewebhu kwekhwalithi ephezulu.
Njengoba izikhungo zedatha ezine zisatshalaliswe kulo lonke elase-United States kanye nesikhungo sedatha phesheya e-Amsterdam, i-TMD Hosting inikezwa ngePC's Choice.
Ukusingathwa kwe-TMD kunikela ngezinhlelo ezahlukahlukene zokubamba, kufaka phakathi okwabiwe, umthengisi, i-VPS, ifu, i-WordPress ephethwe, nezinsizakalo zokubamba ezinikezelwe.
I-TMDHosting ayiphelele kepha ngincomela Ukusingathwa kwe-TMD kuma-blogger noma ngebhizinisi elincane kuya kwesincane elidinga isisombululo esithembekile sokubamba iwebhu. Abagcini nje ngokunikeza ukusebenza okuzinzile kweseva namathani wezici eziwusizo, kodwa futhi baneqembu elisekela abathengi elihamba phambili embonini.
Uma ucabangela uhlelo lokuhlanganyela lokubambisana, ngizokuncoma ukuthi uhambe nge-Business Plan tier njengoba izindleko zesikhathi eside zifana kakhulu ($ 8.95 / mo vs $ 9.95 / mo) kodwa uzoba ngcono kakhulu ukusebenza kweseva nomthamo.
Funda kabanzi ekubuyekezeni kwami ​​i-TMD Hosting
Ama-Newbies, ama-blogger ngamanye, amabhizinisi amancane kuya aphakathi, abasebenza ngokuzimela, izinhlangano ezingenzi inzuzo, abathuthukisi bewebhusayithi, kanye nezinkundla ezinkulu zewebhusayithi.
Ukusingathwa kwe-WordPress ephethwe ngu-LA, okusekelwe ku-2013. .
ngoba: $ 60 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Isitifiketi samahhala se-SSL, isipele ngokuzenzakalela kwansuku zonke, i-plugin yama-cache emhlophe, i-multi-user environment, ukwesekwa kwe-multisite.
Ukukhetha izindawo ze-15 izindawo emhlabeni jikelele.
Ukufuduka kwamahhala kwabasebenzisi abasebenzisi bokuqala.
Idumela elihle - abalandeli be-raving nezibuyekezo ezinhle kuyo yonke indawo.
Ulwazi olunzulu lokusekela ulwazi.
Indawo yesiteji esinokuthuthukiswa esinezigcawu ze-auto zansuku zonke.
Kubiza kakhulu kubasebenzisi abanamasayithi amaningi we-traffic aphansi.
Ayisekeli ukusingathwa kwe-imeyili.
UMark Gavalda, oyi-CEO kanye nomsunguli weKinsta, wamisa inkampani emuva ku-2013 eLos Angeles, CA. Nakuba zisanda kusha, sezikhulile ngokushesha namahhovisi aseLondon naseBudapest.
Njengoba kuqhathaniswa nabathuthukisi be-WordPress be-Veteran, i-Kinsta igxile ekwenzeni amasevisi okubamba i-WordPress ephethwe yi-premium ephethwe yizo zonke izinhlobo zabasebenzisi, kube yizinkampani ezinkulu noma amabhizinisi amancane kuya kwaphakathi.
Elinye lamagama aphezulu ekuphathweni kwe-WordPress ephethwe, i-Kinsta ithole impumelelo enkulu nokuqashelwa kusukela ngenkampani iqalile uhambo lwayo ku-2013.
Okubeka ngempela i-Kinsta ngaphandle kwezinye izidlali ezifanayo emakethe ephathwayo ye-WordPress yokubamba yikhono labo lokuhlinzeka iphaneli yokulawula yomsebenzisi esheshayo, enhle kakhulu futhi elula. Lokho, kanye nobuchwepheshe babo be-server obusha (NGINX, PHP7, HHVM) kanye nokusebenza kwe-server eqinile kwenza kube lula kakhulu kokubili amabhizinisi kanye nabantu ngabanye.
Sebelokhu bephethe imikhiqizo eminingi ehlonishwa emhlabeni jikelele njengoRicoh, Ubisoft, General Electric, ne-ASOS.
Funda ukubuyekezwa okuphelele kwe-Kinsta lapha
Abathuthukisi be-WordPress, izinhlangano ezithuthukisa iwebhu nezentengiso, nabasebenzisi be-WordPress abasezingeni eliphezulu.
I-9. I-WP Web Web
Isungulwe ku-2007, ephethwe ngokuphelele yi-Exabytes yenkampani ye-Southeast Asia.
I-WP Blogger: $ 3 / mo
I-WP Lite: $ 7 / mo
Kubaluleke kakhulu i-WP: $ 17 / mo
I-WP Plus: $ 27 / mo
I-WP Geek: $ 77 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Isizinda samahhala se-.blog, ummeleli we-HTTP / s & NGINX, isitifiketi samahhala se-SSL, i-100 + themes yamahhala ye-WP, i-Jetpack Personal / Professional ifakiwe.
I-Top class ephethwe yi-WP yokubamba ngamanani angabizi.
Umphathi we-WordPress ephethwe nge-imeyili ukubamba.
Isixhumanisi esibonakalayo somsebenzisi esisha.
I-HTTP / s, i-cacher eyakhelwe ngaphakathi, iseva ye-NGINX.
Imiphumela ehlanganisiwe ekuhlolweni kwejubane leseva kaJason.
Intengo evuselelwayo yokuvuselela (40% intengo igxume).
Akukho 24 × 7 ingxoxo bukhoma noma ukwesekwa kwefoni.
Elingenayo yonke iNingizimu-mpumalanga ye-Asia ebamba inkampani i-Exabytes, i-WPWebHost yaqala uhambo lwayo ku-2007 futhi ihlose ukuhlinzeka abasebenzisi ngamathuluzi okuxhumana abalulekile kanye nezixazululo zobuchwepheshe bezokwazisa kumawebhusayithi e-WordPress.
Njengamanje kunezikhungo ezimbili zedatha ezisendaweni yaseDenver, Co, naseSingapore ukunikeza isivinini sokulayisha ngokushesha kuma-US nase-Asia Pacific.
I-WPWebHost ingenye yezinkampani ezihola phambili ze-web hosting e-Southeast Asia kanti ngenkathi seziye ibhizinisi kusukela ku-2007, ziyaqhubeka nokuhlinzeka ngamanani angabizi futhi anokuncintisana ngokusingathwa kwabo kwe-WordPress ephethwe.
Izindleko ezinkulu ezithengekayo kwenza i-WPWebHost ibhekisise ngokufanelekayo kwabasha abasha abafuna ukuphathwa kwe-WordPress eshibhile kodwa banesabelomali encane.
Kodwa-ke, isevisi yabo yamakhasimende esheshayo yokuphendula isivinini kanye ne-lackluster yizingqinamba ezinkulu ongase uthande ukuzicabangela ngaphambi kokubhalisa.
Funda isibuyekezo esigcwele kuWP Web Host
Amasayithi amancane e-WordPress amancane, kuya kwamaphakathi, amabhizinisi amancane, nabaqalayo.
I-Headquartered eLansing, eMelika US; isungulwe ku-1997.
I-VPS #1: $ 29 / mo
I-VPS #2: $ 49 / mo
I-VPS #3: $ 69 / mo
Izimpawu ezisemqoka: Ukuvikelwa kwe-DDoS eyisisekelo kufakiwe, ukuphepha okuthuthukisiwe, ukunwebeka ekubambeni kwamabhizinisi uma kudingeka, insizakalo yamakhasimende enhle kakhulu.
Ukuvikelwa kwe-Firewall + DDoS nazo zonke izinhlelo.
I-HIPAA-ehambisanayo futhi iseva yokudlala ibamba.
Indawo enkulu yolwazi ngosizo lwe-DIY.
Isiqinisekiso sokufakwa esikhundleni se-Hardware
Kubiza kakhulu abasebenzisi abanamawebhusayithi amaningi aphansi omgwaqo.
Ukuntuleka kokukhethwa kweseva e-Asia.
Ezinye izici ezibalulekile (isib. GeoTarget, Multisite) azifakiwe futhi ziyabiza ukwengeza.
Isitifiketi nokusekelwa kwefoni akutholakali kuHlelo Lokuqalisa.
Isungulwe ku-1997 nguMatthew Hill, inkampani eseLansing, eseMichigan inikezela ngezinsizakalo zokubamba iwebhu ezihlomisa ochwepheshe bewebhu emhlabeni jikelele.
Le nkampani inomnikazi ngokuphelele futhi ilawula izikhungo zedatha ezinhlanu. Ngamakhasimende angaphezulu kuka-32,000 emazweni angaba ngu-130, i-LiquidWeb kufanele iqinisekise ukuthi inegunya lokunikeza izixazululo eziningi eziye zaba yi-$ 90 yenkampani enezinkulungwane ezingaphezu kwabasebenzi abangaphezu kwe-600.
I-LiquidWeb itholakele I-INC.5000 I-Award Incesting Companies Award iminyaka engu-9 elandelanayo (2007- 2015).
ILiquidWeb ithengiselwa inkampani yokutshala imali iMadison othandekayo ozakwabo e2015.
I-LiquidWeb ihamba phambili ezicini eziningi kepha ingahle ingabi eyawo wonke umuntu, ikakhulukazi uma kunikezwe inani eliphakeme kakhulu lokungena lezinhlelo zabo ze-WordPress ezilawulwayo.
Yizinkampani ezisingatha imikhiqizo eminingi eyaziwayo yaphesheya kwezilwandle, kufaka phakathi iDucati, iHitachi, iRed Bull, iMTV, iFedEx, iDepho yasekhaya, kanye neChevy Volt.
Umgcini we-web une-service beige-level yokusingathwa kwamanani entengo ebhizinisini, irekhodi lebhizinisi elinamandla, nokusebenza okuhle kakhulu kokubamba - okubenza bakhethe okuhle kwabasebenzisanayo nabasebenzisi bebhizinisi.
Funda isibuyekezo esiphelele se-LiquidWeb sikaTimthothy Shim
Izinhlangano zokuthuthukisa iwebhu nezentengiso, abasebenzisi bebhizinisi abalisebenzisayo, amawebhusayithi amakhulu ebhizinisi, abakhiqizi bemidlalo eku-inthanethi, i-ecommerce, isitolo se-inthanethi.
Sebenzisa Amacala Wokukhetha Kwami Okuhle kakhulu
Okulandelayo, ake siqhathanise amacala ahlukile okusetshenziswa kwalezi zinkampani zokubamba ezilinganiselwe ngaphezulu.
1. Kuhle kakhulu Kububanzi Bokubamba Okuhlukahlukene
Ukusingathwa Okuhle kakhulu Ngobubanzi obuhlukile: Interserver, SiteGround, Ukubamba kwe-TMD
Akuzona zonke izinkampani zokubamba iwebhu ezisebenza emakethe efanayo. Amanye ama-web host agxila ezindaweni ezithile, kanti amanye angathwala lonke uhla lwemikhiqizo. Ukukhetha okulungile ngeke kuxhomeke kuphela kuzidingo zakho zamanje, kepha ukucatshangelwa nokuqina kwesikhathi eside.
Ithiphu: Ibanga lokusingathwa kwewebhu likuthinta kanjani ukukhetha kwakho?
Isibonelo - Amabanga ahlukile wokusingathwa kwewebhu ku-InMotion Hosting
I-GreenGeeks, i-InterServer, ne-TMD Ukusingathwa yizo kuphela ezintathu ezamukela abathengisi - qhathanisa ubuhle babo nokubi lapha.
Ukusingathwa kwe-A2, Ukusingathwa kwe-InMotion, i-InterServer, ne-TMD kungukhetho olukhulu kulabo abafuna ukuqala okuncane (ngaphansi kwe- $ 5 / mo) futhi uthuthukise kamuva.
IKinsta yicala elikhethekile lomsingathi obhekisisa kuphela i-Managed WordPress Cloud kuphela. Lokhu kusho ukuthi yize luncane uhlobo lohlelo lokusebenza, luyakwazi ukukala ngezidingo. I-WP Injini ngamanye amagama adumile ku-niche efanayo (kodwa ayikwenzanga ohlwini lwami), ungakwenza qhathanisa izinhlangothi zombili usebenzisa leli thuluzi.
2. Kuhle kakhulu kubanikazi abaningi bamawebhusayithi
Best for Ukusingathwa Amawebhusayithi amaningi: Ukusingathwa kwe-A2, I-InterServer, I-Hostinger
Endabeni yokubamba okwabiwe ngewebhu, uvame ukukhawulelwa enanini lamawebhusayithi ongabamba nge-akhawunti ngayinye ngokuya ngohlelo. Ama-akhawunti wokusingathwa kwe-VPS awanamkhawulo wesizinda kepha ahlukaniswe ngenani lezisetshenziswa uhlelo ngalunye olunalo.
Kwabiwe Nge-Web host
Iwebhusayithi yokusingathwa kwe-1
Amawebhusayithi wokusingathwa kwe-2-10
I-InterServer $ 4.00 / mo $ 4.00 / mo $ 4.00 / mo
I-Hostinger $ 0.90 / mo $ 2.89 / mo $ 3.99 / mo
Ukusingathwa kwe-A2 $ 3.92 / mo $ 4.90 / mo $ 9.31 / mo
Ukubamba kwe-TMD $ 2.95 / mo $ 4.95 / mo $ 7.95 / mo
I-WP Web Host $ 3.00 / mo $ 17.00 / mo $ 77.00 / mo
Qaphela - IKinsta neLiquidWeb ayinikezi izinsiza zokubamba ezabiwe.
I-VPS / Ukusingathwa kwamafu
I-InterServer $ 18.00 / mo $ 30.00 / mo $ 54.00 / mo
I-Hostinger $ 12.95 / mo $ 29.95 / mo -
Ukusingathwa kwe-A2 $ 25.00 / mo $ 35.00 / mo $ 50.00 / mo
Ukubamba kwe-TMD $ 29.97 / mo $ 52.97 / mo $ 62.97 / mo
I-WP Web Host - - -
Qaphela - Izinhlelo zokubamba i-VPS (cishe) imininingwane: Izinga lokungena - 4 GB RAM, isitoreji esingu-75 GB; Izinga eliphakathi - i-6 GB ye-RAM, isitoreji esingu-150 GB; Kuthuthukile - 8 GB RAM, 250 GB isitoreji. I-InterServer inezinye isethingi eguquguqukayo kunazo zonke njengoba zinazo / zilawula isikhungo sazo sedatha futhi zinikeza nesixazululo sombambiso we-collocation.
3. Ukushesha Kokusingathwa kweWebhu / Best Speed ​​Performance
Ukusebenza Kokusingathwa Kakhulu kweWebhu: InMotion Hosting, I-InterServer, Kinsta
Kunezici ezahlukahlukene ezinganikezwa ngabasakazi bewebhu ukusiza ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Izinto eziningi zithinta ukusebenza okuphelele kwesayithi lakho nokwazi ukutholakala kwalezi zici kungakusiza wenze ukukhetha okungcono.
Ekupheleni kosuku, hlala ugxile kusivinini sokuphendula kweseva, ngoba yiyona nto eyodwa onganayo yokulawula.
Isivinini sokuphendula okuhlanganisiwe kwe-Interserver ngoJanuwari 2020 yi-114.62ms (umthombo). Balinganiselwe njengomgcini wewebhu ophambili ngemodeli yethu yokuthola amaphuzu nge-HostScore leyo nyanga ethile.
Isikhathi sokuphendula seKinsta sihloliwe ku-HostScore.net (umthombo) njalo emahoreni amane ukusuka ezindaweni eziyishumi. Ngalesi sikhathi sokubhala, isikhathi sokuphendula (ngaphandle kweBavabad) sihlala ngaphansi kwe-250ms (okuyinto enhle) ngezinsuku ezedlule ze-30.
Qhathanisa "isivinini" izici
I-HTTP / 2
Ijubane leseva (Ukuvivinya kwethu)
InMotion Hosting Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo I-VPS noma ngaphezulu I-US kuphela ~ 350 ms
I-InterServer Zonke izinhlelo Amasu we-inVPS kuphela noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-US kuphela ~ 250 ms
SiteGround Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Ku-GrowBig noma ngaphezulu kuphela Global ~ 600 ms
GreenGeeks Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Global ~ 400 ms
I-Hostinger Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Global ~ 500 ms
Ukusingathwa kwe-A2 Zonke izinhlelo I-Turbo (ukusingathwa okwabiwe) noma ngaphezulu Global ~ 500 ms
Ukubamba kwe-TMD Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Global ~ 500 ms
Kinsta Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Global ~ 200 ms
I-WP Web Host Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo I-US ne-Asia ~ 700 ms
LiquidWeb Zonke izinhlelo Kusingathwa kuphela ephethwe yi-WP Yebo kepha idinga ukucushwa kwesandla I-US ne-EU ~ 450 ms
I-4. Ukusingathwa Kakhulu kweWebhu Kubathuthukisi
Ukusingathwa Okuhamba Phambili Konjiniyela: Ukusingathwa kwe-A2, I-InterServer, SiteGround
Uma ungunjiniyela futhi udinga izindawo ezithile zokuthuthuka ukuze uthumele futhi uhlole imibhalo yezicelo, kuzodingeka ugxile kakhulu. Nakhu ukuthi ungabamba kanjani amawebhusayithi we-Django, Node.js, Python, noma iWindows (ASP.net) nabahlinzeki bokusingathwa kwe-10 engikhethile.
InMotion Hosting I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu
I-InterServer Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo
SiteGround I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu
GreenGeeks I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu
I-Hostinger I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu
Ukusingathwa kwe-A2 Swift (kwabelwane) noma ngaphezulu Swift (kwabelwane) noma ngaphezulu Zonke izinhlelo Zonke izinhlelo
Ukubamba kwe-TMD I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu
LiquidWeb I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu I-VPS noma ngaphezulu
Ithiphu: Ufuna indawo ekhethekile yokuthuthuka ekusingatheni okwabiwe?
Ukusingathwa kweNode.js kuqala ku- $ 3.70 / mo ku- A2 Hosting.
Iningi le-web host linganikeli okuningi ngendlela yamathuluzi kanjiniyela we-akhawunti yokubamba eyabiwe. Ukusingathwa kwe-A2 ne-Interserver kukhona okungajwayelekile okwenzekayo. Kulabo abafuna ukusingathwa kwe-VPS, izindawo eziningi ziyahlelwa.
Chofoza lapha ukuvakashela Ukusingathwa kwe-A2 / Chofoza lapha ukuvakashela i-Interserver.
5. Okuhamba phambili ngebhizinisi elincane-kuya-eliphakathi
Ukusingathwa Kakhulu Kokuhamba Ngebhizinisi Elincane: Ukusingathwa kwe-A2, InMotion Hosting, SiteGround
Amawebhusayithi amiselwe ibhizinisi noma aqhuba ibhizinisi online nawo azoba nezidingo ezikhethekile. Lokhu kufaka phakathi izidingo zokuphepha ezithuthukisiwe nezinhlelo zokusebenza zokusekela ibhizinisi. Izicelo zewebhu eCommerce ezidumile zifaka Magento, PrestaShop, Futhi WooCommerce.
Ama-web host amaningi amahle azonikeza futhi uhlobo oluthile lwe-SSL yamahhala (i-AutoSSL ye-cPanel, Masibhalelwe i-Plesk) kodwa angisho ukuthi ezimweni ezikhethekile, abanye banganikeza ngaphezulu inketho enamandla - isitifiketi se-Let Encrypt Wildcard.
Ngemininingwane eminingi, funda eyethu umhlahlandlela wokusingathwa kwamabhizinisi amancane.
Ukuhlanganiswa kwe-SSL okulula
InMotion Hosting I-AutoSSL $ 48 / ngonyaka
I-InterServer I-AutoSSL $ 36 / ngonyaka
SiteGround Masibhale Imfihlo Yekhadi Lasendle $ 54 / ngonyaka
GreenGeeks Masibhale Imfihlo Yekhadi Lasendle $ 48 / ngonyaka
I-Hostinger Masibhale *
Ukusingathwa kwe-A2 Masibhale $ 48 / ngonyaka
Ukubamba kwe-TMD Masibhale $ 48 / ngonyaka
Kinsta Masibhale Imfihlo Yekhadi Lasendle
I-WP Web Host Masibhale
LiquidWeb Masibhale **
Qaphela * I-Hostinger inikezela ikheli elilodwa lamahhala elinikezelwe i-IP labo bonke abasebenzisi be-VPS ababamba. Ikheli elizinikezele le-IP alisekelwa ezinhlelweni ezabiwe zokwabelana.
Qaphela ** LiquidWeb inikeza ikheli lokuqala le-IP elizinikezele mahhala. Ikheli elilandelayo le-IP elizinikezele libiza i- $ 84 / ngonyaka.
6. Kuhle kakhulu Kubasebenzisi Abaphambili be-WordPress
Ukusingathwa Kakhulu kwe-WordPress Yabasebenzisi Abathuthukile: Kinsta, SiteGround
Kunamazinga amaningi wabasebenzisi be-WordPress, kusukela kuma-amateurs asekuqaleni kokuya kulabo abanolwazi ukuze bakwazi ukubhala imisebenzi yabo ye-WordPress. Ukwazi lokhu, abaphathi bewebhu baphinde banikeze izinhlobo ezahlukahlukene zamacebo nezici ezikhethekile ze-WordPress njengama plugins we-optimizer. Amasu we-WordPress aphethwe ayindlela enhle kulabo abafuna isandla esiqondisiwe. Kukhona ezinye izingosi ezibuye zibe nochwepheshe be-WordPress njengabasebenzi bokusekela.
Ukuxhaswa Kwesazi se-WP
Izici ezikhethekile ze-WordPress
InMotion Hosting I-BoldGrid - Umakhi wesiza we-WordPress
SiteGround Isiteji, i-WP-CLI, i-SG Optimizer - ipulagi ekhethekile yokusebenza kahle
GreenGeeks I-WP-CLI, i-PowerCacher - iplagin ekhethekile yokusebenza kahle
Ukusingathwa kwe-A2 Isiteji, i-WP-CLI, i-A2 Kwenzelwe - i-plugin ekhethekile yokusebenza kahle
Kinsta Isiteji, i-WP-CLI, ideshibhodi ekhethekile, izinsiza ezibanzi ze-WP
I-WP Web Host Uhlelo lweJetpack lomuntu siqu / lochwepheshe
LiquidWeb Isiteji, i-WP-CLI, i-iThemes Sync
Ithiphu: Ngabe empeleni udinga ukusingathwa kwe-WordPress ephethwe?
Ngesikhathi sokucinga kwakho, ungahle uhlangane nezinhlelo eziningi zokubamba ezilungiselelwe zeWordPress (WP) futhi uthole ukuthi kwezinye izimo, izintengo zalokhu kusingathwa kwe-WP ziphezulu kakhulu (ezinye zikhuphukela kwi-30x pricier) kunesilinganiso sokwabelwa esabelwe.
Umehluko omkhulu wamanani entengo ubangelwa ikakhulu izici eziningi ezigxile ku-WP, kufaka phakathi inqubo ekhethekile yokwakhiwa kwethala, iplatifomu enjiniyela enobungani be-WP, futhi isekela le-WP liyesekela. Lezi zici zingaba yisidingo sabasebenzisi abasebenza kumasayithi we-WP aphezulu kakhulu, izinhlangano zokuthuthukisa / zokuthengisa, noma amabhizinisi osayizi abaphakathi. Abaqalayo nama-blogger amasha, noma kunjalo, cishe ngeke badinge izici eziningi ezinikelwe okwamanje.
Funda kabanzi mayelana nokusingathwa kwe-WordPress ephethwe kule ndatshana.
7. I-Web Hosting enhle kakhulu Yababhali / Ababhali
Ukusingathwa Okuhamba phambili kweWebhusayithi Kwababhali: GreenGeeks, I-Hostinger, Ukubamba kwe-TMD
Isibonelo - Ukusingathwa okwabelwe i-Hostinger kuqala ku- $ 0.80 / mo - Iphelele kuma-freelancers abadinga iwebhusayithi elula.
Okwababhali, ukukhetha umnikazi wewebhu osindisa isikhathi kuqala. Umakhi wesiza osetshenziswa kalula (ukubeka nokubeka indawo ngokushesha), i-webmail (ukuxhumana namakhasimende kanye nabashicileli), namanani entengo angabizi (ibhizinisi lakho eliyinhloko liyabhala) yizidingo zakho ezintathu ezibaluleke kakhulu.
Umakhi Olula weSayithi
I-InterServer $ 4.00 / mo
I-Hostinger $ 0.80 / mo
Ukusingathwa kwe-A2 $ 3.92 / mo
Ukubamba kwe-TMD $ 2.95 / mo
I-WP Web Host $ 3.00 / mo
^ Qaphela - Izindleko zokubhalisa ngemvume zokubamba iwebhusayithi eyodwa.
8. Wabasaqalayo-Abangane Usizo Services
Ukusingathwa Okuhamba phambili kweWebhusayithi Kwababhali: GreenGeeks, InMotion Hosting
Ideshibhodi yeGreenGeeks - Iyasebenziseka futhi kulula ukuyifinyelela.
Wabasaqalayo, ukukhetha umnikazi wewebhu kushibhile futhi kulula ukuqala ngayo kubaluleke kakhulu. Ukwenza kusebenze i-akhawunti esheshayo, iphaneli yokulawula okusebenziseka kalula, nokusekelwa okuhle okuhlala kulungele ukusiza kuyizidingo ezintathu ezibalulekile.
Wabasaqalayo abaqala nje - I-InMotion Hosting ne-GreenGeeks iza nepaneli yokulawula okulula ukuyisebenzisa (cPanel) nokuxhaswa okuhle ngamanani ashibhile kakhulu.
Ideshibhodi entsha yomsebenzisi eyakhelwe ngokwakhiwa i-GreenGeeks yenza into ilungele abaqalayo ngezindlela eziningi. Ukufaka i-SSL yamahhala, ngokwesibonelo, kulula kakhulu endawenikazi yabo. Ngakolunye uhlangothi, isikhathi sesivivinyo se- “Money Back Guarantee” sikhuphuka sifike ezinsukwini ezingama-90 kwa-InMotion - okubenza babe ukukhetha okungenazingozi kwama-newbies.
InMotion Hosting $ 3.99 / mo izinsuku 90 cPanel
I-InterServer $ 4.00 / mo izinsuku 30 cPanel
SiteGround $ 6.99 / mo izinsuku 30 Ngaphakathi
GreenGeeks $ 2.95 / mo izinsuku 30 cPanel
I-Hostinger $ 0.80 / mo izinsuku 30 Ngaphakathi
Ukusingathwa kwe-A2 $ 3.92 / mo izinsuku 30 cPanel
Ukubamba kwe-TMD $ 2.95 / mo izinsuku 60 cPanel
Kinsta $ 29.00 / mo izinsuku 30 Ngaphakathi
I-WP Web Host $ 3.00 / mo izinsuku 100 I-Plesk
LiquidWeb $ 25.00 / mo izinsuku 30 I-Plesk
^ Qaphela - Izindleko zokubhalisa ngemvume zokubamba iwebhusayithi eyodwa endaweni eyabiwe.
9. Isikhathi Eside, Izisombululo Eziyimpumelelo
Best for Isikhathi Eside: Ukusingathwa kwe-A2, I-InterServer
Isibonelo - i-InterServer ayihlanganisi intengo yayo ngesikhathi sokuvuselela.
Abanikazi bewebhusayithi bayazi ukuthi ukutshala imali kokuqala kuyingxenye yezindleko zabo jikelele. Lokhu kungenxa yezici ezihlukile njengezindleko zokubamba. Iningi labahlinzeki bokubamba iwebhusayithi linikezela ngezaphulelo ezinamandla zokungena ngemvume okukulukhuni ukumelana nazo. Kodwa-ke, amanani akhuphuka kakhulu uma sekuyisikhathi sokuvuselela uhlelo lwakho. Lapho ubala izindleko ezingaba khona zomsingathi wewebhu, gcina lokhu engqondweni njengengxenye yokuhlelela kwakho.
InMotion Hosting $ 3.99 / mo $ 9.99 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-90
I-InterServer $ 4.00 / mo $ 4.00 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
SiteGround $ 6.99 / mo $ 14.99 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
GreenGeeks $ 5.95 / mo $ 14.95 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
I-Hostinger $ 2.15 / mo $ 11.95 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
Ukusingathwa kwe-A2 $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo Noma inini imali ngiyibuyile
Ukubamba kwe-TMD $ 4.95 / mo $ 7.95 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
Kinsta $ 60.00 / mo $ 60.00 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
I-WP Web Host $ 27.00 / mo $ 27.00 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-100
LiquidWeb $ 29.00 / mo $ 29.00 / mo Isivivinyo samahhala sezinsuku ze-30
^ Qaphela - Amanani asuselwa enkathini yokubhalisela yeminyaka engu-2.
Ithiphu: Yini intengo efanele ukukhokha?
Kunezinhlobo eziningi zezinsizakalo zokubamba, zonke ngamanani entengo ahlukile futhi zinikeza izici ezahlukahlukene nezinketho. Awudingi ukuthola hhayi kuphela olinganiswe kahle nentengo, kodwa futhi ukhethe eyodwa evumelana nezidingo zakho zewebhusayithi.
Iqembu lami libuke amadili okusingathwa kwe400 futhi lashicilelwa lesi siqondisi samanani wokubamba muva nje. Ngokujwayelekile, lindela ukukhokha u- $ 3 - $ 10 ngenyanga kumsingathi onokwethenjwa owabiwe, $ 30 - $ 55 ngenyanga ngokusingathwa kwe-VPS okuphakathi.
10. Kuhle kakhulu Kumawebhusayithi Omuntu
Ukusingathwa kwewebhusayithi enhle kakhulu: GreenGeeks, I-Hostinger, Ukubamba kwe-TMD
Njengokusingathwa kwababhali, ukusingathwa kwewebhusayithi yomuntu siqu kufanele kube okungabizi futhi okulula ukukusebenzisa. Akunandaba noma ngabe kungukushicilela i-CV yakho noma iphakamise "uhlobo lwakho lomuntu siqu" - Umakhi wesiza osetshenziswa kalula, izici ze-webmail ezakhelwe phansi, kanye namanani entengo abizayo abaluleke kakhulu kumgcini wewebhusayithi wangasese.
Kulabo abaphethe iwebhusayithi eyodwa yomuntu siqu, i-Hostinger inikeza isixazululo eshibhile ($ 0.80 / mo kokubhalisa). Ukusingathwa kwe-TMD neGreenGeeks kunikela ngokuthile okuhle kodwa kubamba amawebhusayithi angenamkhawulo futhi kunikela ukusekelwa okuhle kwamakhasimende.
11. Okuhle kakhulu ngamawebhusayithi e-UK
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwabasebenzisi base-UK: Kinsta, SiteGround
Ukuzwisisa ukuthi yini eyenza umgcini wewebhu abe yindawo enhle yendawo ethile, sidinga ukuxoxa ngakho I-latency.
Kuyini ukufika kwesikhathi?
I-latency yisikhathi sokuphakelwa kweseva nokwenziwa kwesicelo esenziwe umsebenzisi.
Yibheke njengokundiza - Lapho abasebenzisi abangamaNgisi befika kwiwebhusayithi ephethwe e-Australia, izicelo zakhe zindiza zivela e-England - Middle East - Asia - Australia - Asia - Middle East - England ukubuya nomphumela. Isikhathi sendiza yisikhathi sokuphela kwaleyo webhusayithi.
Uma leyo webhusayithi ethile isingathwe eNgilandi, izicelo beziyobe sezindizela ngaphakathi eNgilandi kuphela, kunciphisa isikhathi sokuhamba.
Ukubona ukuthi i-latency yenzeka kanjani empilweni yangempela, nasi isibonelo.
Eminyakeni edlule le sayithi oyifundayo ibisingathwe esikhungweni semininingwane e-United States. Ngezansi isivinini sesayithi elihloliwe kusuka ezindaweni eziyi-10 zisebenzisa Bitcatcha.
Imiphumela yokuhlolwa kwejubane lewebhusayithi (2018) kusuka ezindaweni eziyi-10.
Ukusuka kwisithombe-skrini, ungabona ukuthi isikhathi sokuphendula kweseva siyehluka kuye ngendawo. Isayithi elayishe ngokushesha (i-8ms) yezindawo zokuhlola e-United States futhi zalayishwa kancane ezindaweni zokuhlola eJapan nase-Australia (367ms no-414 ms).
Indawo esondelene kakhulu nezithameli zakho kuseva yakho, i-latency ephansi iyona.
Kungani i-latency ibalulekile?
I-Latency iyingxenye ethile yesikhathi sakho sokulayisha iwebhusayithi. Ngokwenza ngcono i-latency (ukukhetha ukusingatha izithameli zakho), isikhathi sakho sokulayisha iwebhusayithi sizothuthuka kakhulu.
Ngamanye amagama, uma iningi lezilaleli zakho zikulelo lizwe noma isifunda esifanayo, kungcono ukusingathwa kwewebhusayithi yakho eduze kwazo.
Lokhu kuchaza ukuthi kungani i-latency iyinto ebalulekile lapho ukhetha i-web host.
Manje iyiphi i-web host efanele amawebhusayithi e-UK?
Ilungu leqembu lami lenze ukucubungula kwe-latency kwezinye izinkampani zokubamba ezinezikhungo zedatha ezise UK futhi zazihlela ngokusezingeni lentengo, izici, ne-latency. Sekela emiphumeleni yakhe yokuhlolwa, SiteGround - enendawo yeseva esekwe eLondon, ibiphakathi kosokhaya abanejubane eliphezulu. Kinsta, ngakolunye uhlangothi, isebenza kumaseva anikezwe amandla yi-Google Cloud eLondon (ikhwalithi yesivinini efakazelwe kahle).
SiteGround London I-34 ms I-101 ms
PickAWeb Enfield I-35 ms I-104 ms
Inhliziyo Inthanethi Leeds I-37 ms I-126 ms
HostingUK London, Maidenhead, Nottingham I-41 ms I-272 ms
Umsingathi Osheshayo Gloucester I-59 ms I-109 ms
tsoHost I-Maidenheadhead I-68 ms I-582 ms
EUK Host Wakefield, Maidenhead, Nottingham I-34 ms I-634 ms
12. Kuhle kakhulu kumawebhusayithi aseMalaysian naseSingapore
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwabasebenzisi baseMalaysian nabaseSingapore I-Hostinger, SiteGround , Ukubamba kwe-TMD
Ukuqonda ukuthi yini eyenza lezi zinsizakalo zokubamba zihle kakhulu kumawebhusayithi aseMalaysia naseSingapore, ngicela ufunde incazelo yami nge-latency.
Ukuhlolwa okusheshayo okwenziwe yilungu leqembu lami u-Abrar Mohi Shfee.
I-Hostinger Malaysia I-8 ms I-191 ms I-S $ 1.00 / mo
Ukubamba kwe-TMD Singapore I-8 ms I-237 ms I-S $ 4.05 / mo
SiteGround Singapore I-9 ms I-585 ms I-S $ 5.36 / mo
Ukusingathwa kwe-A2 Singapore I-12 ms I-1795 ms I-S $ 5.34 / mo
BI Malaysia, Singapore I-19 ms I-174 ms I-S $ 5.99 / mo
I-Vodien Singapore I-7 ms I-107 ms I-S $ 10.00 / mo
Shinjiru Malaysia I-24 ms I-119 ms I-S $ 5.00 / mo
Imibuzo Ebuzwa Njalo Kwensizakalo Yokubamba
Ngachaza izisekelo zokubamba iwebhusayithi ku lesi sihloko kodwa uma ufuna ezinye izimpendulo ezisheshayo…
Kuyini ukusingathwa kwewebhu?
Ukusingathwa kwewebhu kuwukuhlinzeka ngezinsizakusebenza ezinjengendawo yokugcina nendawo nengqalasizinda yenethiwekhi yabasebenzisi ukusebenzisa iwebhusayithi.
Okuningi mayelana nokuthi ukusingathwa kwewebhu kusebenza kanjani lapha.
Iyini igama lesizinda?
Igama lesizinda yikheli elinobuntu lewebhusayithi. Kuthayipha ibha yekheli lesiphequluli se-Inthanethi elihanjelwe izivakashi ukufinyelela isiza.
Okuningi mayelana nokuthi igama lesizinda lisebenza kanjani lapha.
Yiziphi izinhlobo zezinsizakalo zokubamba iwebhu?
Izinhlobo eziyisisekelo zokubamba iwebhu zifaka phakathi okwabiwe, i-VPS / iCloud kanye neseva ezinikezele. Umehluko omkhulu uvame ukusebenza, ukuphepha, nokwethenjwa.
Bona izinhlobo ezahlukahlukene zokubamba iwebhu lapha.
Uyini umehluko phakathi kokusingathwa kwewebhu negama lesizinda?
Igama lesizinda likunikeza indawo yewebhusayithi, kuyilapho ukusingathwa kwewebhu kungumsebenzi ophatha ukuthi isayithi lihanjiswa kanjani kubavakashi.
Ngiqasha kuphi isivakashi seWebhu?
Kunezinkulungwane zabanikezeli beensizakalo zokubamba iwebhu kuyo yonke i-Intanethi; thina kubuyekezwe okungaphezu kwe-60 yabo kule webhusayithi.
Ngingakwazi ukuthenga futhi ngibe nomphathi wami we-web?
Yebo. Izinkampani eziningi ezinkulu zithenga, zisingatha, futhi zigcina ama-server wazo esikhungweni sedatha ukuze zisebenzise zona kuphela.
Okuningi mayelana nokubamba iwebhusayithi yakho endaweni yakini.
Izinkampani eziningi ezinkulu zokubamba iwebhu zizonikela ini?
Izinkampani ezinkulu zokubamba iwebhu ngokujwayelekile zizonikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo ezihlobene newebhu. Lokhu kufaka phakathi izinhlelo zokubamba iwebhu, ukuthengiswa kwamagama wesizinda, nezinhlelo zokuthengisa kabusha.
Uyini umthengisi wokusingathwa kwewebhu?
Abanye abantu bazothenga ukusingathwa kwewebhu ngobuningi futhi bahlukanise izinsiza zokuqasha. Lokhu kubizwa ngokuthi kusingathwa komthengisi.
Ngabe ibukeka kanjani i-server?
Kunezinhlobo ezimbili zamaseva - ebangeni labathengi nelokuhweba. Amaseva ebanga labathengi abukeka njengamabhokisi we-PC ejwayelekile ye-desktop ngenkathi amaseva ezentengiso abukeka njengamabhokisi amakhulu anama-racks kuwo.
Yini engiyidingayo ukuze ngisingathe iwebhusayithi yami?
Ukusingatha iwebhusayithi, udinga igama lesizinda nokusingathwa kwewebhu. Igama lesizinda ikheli elikhomba lapho kugcinwe khona amafayela akho e-webhusayithi.
Amawebhusayithi ngamaqoqo amakhasi e-web anikela ngombhalo wokuhlanganisa, ividiyo nezithombe ezivakashini. Iwebhusayithi ngayinye ngokuvamile izoba namakhasi amaningi afakwe ngaphansi kwegama elilodwa lesizinda.
Lokho kuphela kwalesi sihloko. Uma ungakaneliseki, funda:
Lapho ukuthenga igama lakho lesizinda lokuqala
Izindleko zokuqamba iwebhusayithi esebenzayo
Kufanele usebenzise malini ekusingatheni kuwebhu
Indlela yokudala iwebhusayithi kusukela ekuqaleni
Indlela yokudlulisela isayithi lakho kwenye indawo
I-P / S: Izixhumanisi ezikhomba izinkampani zokubamba ziyizixhumanisi ezihambelana nazo - uma ubhalisela insizakalo yokubamba ngalezi zixhumanisi, ngizotholwa njengomuntu obhekisa kuwe futhi enze imali. Le yindlela engigcina ngayo le sayithi iphila (isizinda, amaseva, izindleko zokuhlola, njll) futhi ngikhokhela imiholo yamalungu eqembu lami. Ukuthenga ngesixhumanisi sami esixhumene naye akubizi kakhulu - sicela usisekele uma uthola umhlahlandlela wethu wokusingatha.
I-P / P / S: Kudinga umzamo omkhulu ukuqoqa, ukuhlanganisa, nokuvuselela le mininingwane (igcine ihlolwe ngoJanuwari 2020). Ngicela ungazise uma uthola noma yimaphi amaphutha noma imininingwane ephelelwe yisikhathi kumathebula alandelayo.
InMotion - qala $ 2.49 / mo (i-oda)
Interserver - qala $ 4 / mo (i-oda)
SiteGround - qala $ 6.99 / mo (i-oda)
GreenGeeks - qala $ 2.95 / mo (i-oda)
I-Hostinger - qala $ 0.90 / mo (i-oda)
Ukusingathwa kwe-A2 - qala $ 3.92 / mo (i-oda)
Ukubamba kwe-TMD - qala $ 2.95 / mo (i-oda)
Kinsta - qala $ 30 / mo (i-oda)
I-WP Web Host - qala $ 3 / mo (i-oda)
LiquidWeb - qala $ 29 / mo (i-oda)
I-Best Hosting Use-Cases / Scenarios
Kuhle kakhulu ebangeni elihlukile lokusingathwa
Kuhle kakhulu kumawebhusayithi amaningi
Ukusebenza kwejubane eliphezulu kakhulu
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwabathuthukisi bewebhu
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwe-eCommerce
Kuhle kakhulu kubasebenzisi abasezingeni eliphakeme be-WP
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwababhali / ababhali
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwabaqalayo
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwabasebenzisi besikhathi eside
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwamawebhusayithi omuntu
Ukusingathwa okuhle kakhulu kwe-United Kingdom
Kuhle kakhulu ukusingathwa kweMalaysia / Singapore
* Ukudalulwa Kokuthola: I-WHSR ithola imali yokudlulisela ezinkampanini zokubamba ezishiwo kulesi sihloko.
Ukusingathwa Kwewebhu Okungenamkhawulo: Ngempela?
Ukubuyekeza kwe-VPN: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / IPVanish / I-TorGuard
Ingabe ama-VPNs Asemthethweni? Amazwe ayi-10 Avimbayo Ukusetshenziswa kwe-VPN
Ukuvimbela Umlobi? Izinto ze-8 Ongayibloga Nge-Ecommerce Site Yakho
Hamba i-hook yakho: ama-Freebies amahle kakhulu wokukhiqiza ama-Leads